Personal Productivity 2.0 • Toe Tet
ဘဝရည်မှန်းချက်တွေ အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ 6E နည်းစနစ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ ငါးနှစ်က ဒီလိုအချိန်မှာ စီမံခန့်ခွဲမှု၊ မားကတ်တင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ အသိ သုည။ မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုမရှိ အလုပ်ပြီးမှု အောက်ဆုံး။ ငွေကြေး အဆင်မပြေ။ အလုပ်မရှိကနေ လေးလအတွင်း Business Management Graduate Diploma (Abe,uk) ကိုဖြေဆိုအောင်မြင်ခဲ့ပြီး Company အလုပ်တစ်ဖက် နဲ့ ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစရင်း MBA ပြီးဆုံးအောင် ကူညီဖေးမခဲ့သည့် အလုပ်ဆယ်ဆကျော်ပိုပြီးစေခဲ့တဲ့ Secrets to Personal Productivity ကို Online Program လေးစီစဉ်ထားပေးပါတယ်။
1. Resources Vs Result
2. Conscious Mind Vs Unconscious Mind
7. Emotion Vs Feeling
8. Powerful Beliefs
12. Empowering Yourself
13. One Page Personal Productivity
Dr. Phyo Paing Profile
Business Management နှင်. Marketing ဘာသာရပ်များကို သင်တန်းသားပေါင်း 15000 ကျော်ကို သင်ကြားပို.ချပေးခဲ.ပြီးဖြစ်ပါသည်။
(P.S – မည်သည့် Online သင်တန်းအတွက်မဆို စိတ်တိုင်းမကျပါက တစ်ပတ်အတွင်း 100% Refund.)
၃၉ လမ်း(ဗန်းမော်တိုက်လမ်း)၊ ၇၁ လမ်းနှင်. ၇၂ လမ်းကြား၊ ရာဇာစင်တာ၊ မန္တလေးမြို.။
1. Resource Vs Result
2. Objective of this training
4 Philosophy of Life
6 Stop & Start
7 Energy (respiration)
8 Energy (Affirmation, Posture, Movement)
9 Emotion (4 negative behavior)
10 Powerful belief 1
11 Emotion (No Complaint)
12. Three Powerful beliefs
13 End result ( Power of Goal Setting)
14 Find Your Why
16 Empowering Yourself
17. One Page Productivity Plan